Maamulada Puntlaan iyo Jubba oo War-Murtiyeed Ka Soo saaray Shirkii Ksimaayo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Maamulada Puntlaan iyo Jubba oo War-Murtiyeed Ka Soo saaray Shirkii Ksimaayo
Maamulada Puntlaan iyo Jubba oo War-Murtiyeed Ka Soo saaray Shirkii Ksimaayo
Madaxweyanah Maamulka Puntlaan Cabdiweli Cali Gaas ,ayaa dahwaan waxaa uu tagay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Mamaulka Jubba, halkaasi oo uu kulamo kula lahaa Axmed Maxamed Islaam,iyada labada mas’uul ay kawada hadlayeen arimaha labada dhinac.
Shirka ayaa waxaa xoogga lagu saaray iskaashiga Aminga,Ganacsiga iyo horumarinta xariirka labada Maamul waxaana laga soo saaray war-Murtiyaad sida u qornaa
1-In Jubaland iyo Puntland aragti mideysan ka yeeshaan xaqiijinta Hiigsiga sanadka 2016 iyo in la dadejiyo dhamaystirka federaalka iyadoo la raacayo Dastuurka Qaranka.
2-In la dadejiyo fulinta qodobadii ay isku afgarteen Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubaha ka ah Federaalka 6 Feberaayo 2015.
3-In Jubaland iyo Puntland soo magacowdaan xubnaha uga mid noqonaaya Guddiyada heer Qaran oo ay ka mid yihiin guddiga dib u eegista dastuurka, amniga qaranka, isku xirka xukuumadaha, Federaalka iyo kala xadeynta xuduudaha, doorashooyinka iyo guddiyada kale.
4-In Jubaland iyo Puntland si wada jir ah u samaystaan gole wada jir ah oo ka shaqeeya xoojinta xiriirka labada maamul.
5-In mucaawanooyinka lagu helo magaca Soomaaliya si dheelitiran loogu qaybiyo degaanada Soomaaliya iyo in Dowladda Federaalku ay u fududeyso hay’adaha caalamiga ah in ay si toos ah u caawin karaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya (No Objection policy).
6-In Qorshayaasha Hindisaha cusub (New Deal plans) lagu baahiyo Dowladaha xubnaha ka DF, isla markaana samaystaan xafiis ka shaqeeya isku xirka isku dubaridka iyo xiriirka deeqaha.
7-In Jubaland iyo Puntland ay aragti mideysan ka yeeshaan qaabka loo maamulayio kheyraadka dabiiciga ah iyadoo Dowladda Federaalku qadanayso awooda uu siiyey Dastuurka Qaranka.
8-In Dowladaha xubnaha ka ah DF ay qayb ka noqdaan talada wax kasta oo saameyn ku yeelan kara nolosha iyo mustaqbalka shacabka ay metalaan.
1-In la qabto shir weyne ay isugu imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah DF Soomaaliya si looga wada tashado arrimaha ciidanka Qaranka.
2-In la iska kaashado la dagaalanka argagixisada magac kasta oo ay wataan iyo in la is dhaafsado xogta cadowga.
3-In Puntland gacan ka siiso Jubaland dhinaca Tababarada Booliska, gaar ahaan isticmaalka adeegyada kala duwan ee xarumaha tababarda ee degmada Carmo ee ku taal Puntland.
4-In dhamaan tababarada ciidamada heer Federaal ay noqdaan kuwo loo siman yahay lana gaarsiiyo Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
1- In labada Dowladood iyo labada bulshoba ay iskaashi ka yeeshaan arimaha horumarinta dhaqaalaha iyadoo taas ay hormuud ka noqonayaan labada wasaaradood iyo labada Rug ganacsi.
2-In canshuur hoose laga qaado badeecadaha labada dhinac is dhafsanayaan.
1-Waxaa la isku raacey in la wadaago aqoonta iyo waayo aragnimada la xiriirtaa kobcinta aqoonta Hay’adaha kala duwan ee Dowladda.
Waxaan ku baaqeynaa in la damiyo colaadaha ka aloosan Gobolada Dhexe isla amrkaana Dowlada Federaalka qaadato doorka uga aadan arrintaas.
Previous articleWasiirka Arimaha Dibadda oo WFP kala Hadlay Arrimaha Cunta Yarida
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo Soo bandhigtay Waxqabadkeeda.